Maxaa Ka Ogtahay 10-ka Haween Ee Ugu Awooda Badan Africa (Warbixin & Sawirro) | RBC Radio	Home
Thursday, August 30th, 2012 at 12:14 am	/ 4 Comments Saturday, May 12th, 2012 at 10:26 am Maxaa Ka Ogtahay 10-ka Haween Ee Ugu Awooda Badan Africa (Warbixin & Sawirro)
Nairobi (RBC) Waxa dhawaan la soo saaray warbixin ay ku qoran yihiin 10-ka haween ee ugu awooda badan Qaarada Africa.
Waxa ugu horeeya:
1-Luisa Diogo: waa siyaasi reer Mozambic ah, taas oo noqotay ra’iisal wasaarihii ugu horeeyay ee dalka Mozambique bishii February 2004. siddoo kale waxa ay noqotay wasiirada Beeraha iyo Maaliyada dalka Mozambique.
2-Monhla Hlahla: waa maamulaha shirkadaha garoonka diyaaradaha dalka Koonfur Africa. waxa ay horey shaqaalo uga soo noqotay barkiga horrumarinta ee dalka Southern Africa (DBSA).
3- Phumzile Mlambo-Ngcuka: waxa ay noqotay ku xigeynka madaxweynaha dalka Koonfur Africa laga soo bilaabo 2005 ilaa 2008. sidoo kale waxana ay noqotay haweeneydii ugu horeeyay ee jagadaas qabato taarikhda dalka South Africa.
4-Shirley Lue Arnold waxa ay ka soo shaqeeysay oo ay maamulo ka noqotay Mmela Consultancy & Advisory Services.waxa ay u qaabilsaneed lataliye sodoo kale waxa ay la taliye ka noqotay shirkad ay si gooni u leedahay oo la yiraahdo BEE .
5-Turai Yar’ Adua waxa weeye xaaskii madaxweynihii hore dalka Nigeria, Umaru Yar’Adua, Turai waxa ay noqotayis haweeneydii ugu horeysay ee maamule ka noqoto howlo nabad African.
6- Wendy Luhabe waxa ay aas-aastay xarun gaar u ah dumar, waxana ay ka mid noqotay dumarka ugu saameynta badan South Africa.
7- Cecilia Ibru waxa ay horey u soo noqotay maamulaha isuduwaha xafiiska Oceanic Bank waana mid ka mid ah dumarka ugu awooda badan dalka Nigeria.
8-Ellen Johnson-Sirlea : Haweeneyda wax ku soo baratay Jaamacadda Harvard-f,waxa loogu yeeraa haweeneyda birta, waxa ay noqotay haweeneydii ugu horeysay ee Africa madaxweyne ka noqoto dal, oo ah dalka Liberia.
9-Joyce Mujuru waa siyaasi reer Zimbabwe ah, taas oo soo qabatay xilka madaxweyne ku xigeynka xisbiga talada haya ee n Zanu-PF siddoo kale waxa ay la soo shaqeeysay mparty, Joseph Msika iyo madaxweyne Robert Mugabe.
10-Qofka ugu dambeeya ee haweenka ugu awooda badan Africa The CEO of ABSA bank, one of the biggest financial services firms in South Africa, is seen as one of the architects who crafted the new and improved South African economy.
Tags: Xubin	Leave a Reply